စောစောလကျထပျလိုတဲ့ ဆန်ဒကိုပွောပွလာတဲ့ Yeo Jin Goo | News Bar Myanmar
စောစောလကျထပျလိုတဲ့ ဆန်ဒကိုပွောပွလာတဲ့ Yeo Jin Goo
မငျးသားလေး Yeo Jin Goo ကတော့ သူစောစောစီးစီး လကျထပျလိုကွောငျး ဆန်ဒကို ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မကွာသေးမီက Yeo Jin Goo ဟာ tVN ရဲပ House on Wheels အစီအစဉျမှာ ဧညျ့သညျအဖွဈ သှားရောကျခဲ့တာပါ။
Yeo Jin Goo နဲ့အတူ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမြားဖွဈကွတဲ့ Sung Dong Il, Kim Hee Won နဲ့ Kang Hyo Jin တို့လညျး အတူတူရှိနခေဲ့ကွပါတယျ။ စကားတပွောပွောနှငျ့ ရှိနရောက အခဈြအကွောငျးလညျး ပွောဆိုခဲ့ကွပါသေးတယျ။
မငျးသားကွီး Sung Dong Il မှလညျး Yeo Jin Goo ကို အခဈြနဲ့ ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျခဲ့ပါတယျ။ Yeo Jin Goo ကတော့ “ကြှနျတော့မှာ တဈဖကျသကျအခဈြပဲရှိခဲ့ပါတယျ။ တဈခါမှတော့ ရညျးစားမထားခဲ့ဖူးပါဘူး” ဆိုပွီး ရှကျပွုံးလေးနဲ့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတျော လကျထပျမယျအစီအစဉျကို သခြော ဆုံးဖွတျထားတာတော့ မရှိပမေယျ့ ကြှနျတျော စောစောတော့လကျထပျခငျြမိပါတယျ။ ပြျောရှငျနတေဲ့ မိသားစုတှေ မွငျတိုငျးလညျး စောစော လကျထပျခငျြတဲ့ အတှေးပေါကျမိပါတယျ” လို့ လကျထပျမယျ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။
Yeo Jin Goo ကို 1997 ၊ ဩဂုတျလမှာ မှေးဖှားခဲ့တာ ဖွဈတဲ့အတှကျ လကျရှိ ၂၃ နှဈပဲရှိပါသေးတယျ။ Yeo Jin Goo တကယျပဲ စောစော လကျထပျဖွဈမလားဆိုတာကတော့ …!
(Zawgyi) စောစောလက်ထပ်လိုတဲ့ ဆန္ဒကိုပြောပြလာတဲ့ Yeo Jin Goo
မင်းသားလေး Yeo Jin Goo ကတော့ သူစောစောစီးစီး လက်ထပ်လိုကြောင်း ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက Yeo Jin Goo ဟာ tVN ရဲပ House on Wheels အစီအစဉ်မှာ ဧည့်သည်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့တာပါ။
Yeo Jin Goo နဲ့အတူ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ Sung Dong Il, Kim Hee Won နဲ့ Kang Hyo Jin တို့လည်း အတူတူရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ စကားတပြောပြောနှင့် ရှိနေရာက အချစ်အကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။
မင်းသားကြီး Sung Dong Il မှလည်း Yeo Jin Goo ကို အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Yeo Jin Goo ကတော့ “ကျွန်တော့မှာ တစ်ဖက်သက်အချစ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါမှတော့ ရည်းစားမထားခဲ့ဖူးပါဘူး” ဆိုပြီး ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော် လက်ထပ်မယ်အစီအစဉ်ကို သေချာ ဆုံးဖြတ်ထားတာတော့ မရှိပေမယ့် ကျွန်တော် စောစောတော့လက်ထပ်ချင်မိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိသားစုတွေ မြင်တိုင်းလည်း စောစော လက်ထပ်ချင်တဲ့ အတွေးပေါက်မိပါတယ်” လို့ လက်ထပ်မယ့်အကြောင်းကိုလည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
Yeo Jin Goo ကို ၂၀၂၀၊ ဩဂုတ်လမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိ ၂၃ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Yeo Jin Goo တကယ်ပဲ စောစော လက်ထပ်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ …!
Next အမှနျတှပွေောလှနျးလို့ အမုနျးခံခဲ့ရဖူးသညျ့ G-Dragon »
Previous « Selfie ရိုကျပွီးရငျ ဘာမှပွုပွငျစရာမလိုအောငျကိုခြောတဲ့ NCT's Jaehyun